Imvelo ibonakala ngokuhlakanipha nobuntu. Ngakho-ke, izilwane, ezikhiqiza inzalo, azidingi usizo olungaphandle. Kodwa uma iphathelene nezilwane ezifuywayo, ucabanga ngenye indlela. Inja, isibonelo, ukuhlala endlini yakho, inabantu abaningi kangangokuthi awucabangi ngisho nokuthi ingakhula ngaphandle kosizo lwakho. Ngempela, ngosizo lwakho, ezimweni eziningi, akudingi. Okudingekayo kuwe ukulungiswa kwendawo yenja. Khona-ke ungakwazi ukubuka nje okwenzekayo. Endabeni lapho inja inezinzala zokuqala, kubonakala kuye njengokucindezeleka okukhulu. Kodwa kukucindezela nakakhulu kuwe, ngoba kulezi zimo kunezinhlobo eziningi zezimangalo, okudingeka ukuthi ulungiselelwe kahle. Ngakho ungasiza kanjani ukubeletha inja?
Into yokuqala okufanele uyenze ukuxoxisana nodokotela wezilwane ukuze uthole usizo esimweni esibi kakhulu. Yiba nezinombolo zamafoni akhe. Futhi futhi ukugcina uxhumano nosizo oluphuthumayo lokunakekelwa kwezilwane. Kodwa konke okufanayo kuyadingeka ukuba nethemba, ukuthi ngeke kudingeke ukuba usebenzise usizo futhi bonke bayodlula ngempumelelo. Esesibili ukuthi kufanele ube nemithi edingekayo. Bona lokho onakho futhi ugcwalise isitoko. Kufanele kube:
Isilikhi noma izintambo zama-acrylic;
Utshwala noma i-vodka.
Bese uphinde usebenzise amashidi ahlanzekile noma ama-diapers angeke akhululwe kamuva, ibhodlela lamanzi ashisayo noma amabhodlela epulasitiki ngamanzi ashisayo, ibhokisi elincane elizofana negumbi lokulala lamantombazane. Kuyinto elula kakhulu ukusebenzisa i-blanket-Ukushisa pad kulokhu. Kuyoba ngcono uma kukhona ithuba, Yebo, ukwenza i-playpen kumama nezingane zakhe. Kungaba ngendlela yebhokisi elincane noma ebhokisini, ngokuvamile, inja kufanele ikhululeke kuyo futhi ithole ithuba lokusakaza ekuphakameni kwayo okugcwele. Kulesi sakhiwo kubalulekile ukunikeza igebe elincane phakathi kwengxenye engezansi yezinhlangothi nangaphansi kwebhokisi. Lokhu kwenziwa ukuze inja ingacindezeli ama-puppies ngokumelene nodonga lwe-arena. Kulungile, futhi uma ungazange ukwazi ukulawula inkundla enjalo, bese ulungisa inja endaweni ethile eduze kwebhethri yebhethri, uyimboze ngengubo noma umshini wokugqoka bese uyifaka nge-oliva, bese ufaka i-diaper phezulu.
Ithemu lokukhulelwa inja ligijima kusukela ezinsukwini ezingu-58 kuya kwezingu-68. Futhi ukubeletha kungaqala nganoma yisiphi isikhathi semini nobusuku, futhi lesi sikhathi asikwazi ukungafaneleki ngokuphelele kuwe, njengoba ungakwazi ngalesi sikhathi ungabi khona noma ulale. Kuzoba ngcono ukufika emadolobheni ukuze ususe usuku izinsuku ezimbalwa futhi ulungele ukuba kulo mzuzu ophetheyo eduze kwesilwane sakho. Uma ungasekho ekhaya, inja ingakhetha umbhede noma i-sofa yokubeletha kwakho, futhi uzothola ukuphazamiseka, ukukhathazeka ngesimo sensizwa yakho. Emngceleni wokubeletha, inja ikhathazekile ngokukhathazeka. Lokhu kuboniswa ukuthi uqala ukufuna indawo yokubeletha. Uma kwenzeka, uma usuthole kakade, izophula umthamo bese uzama. Lokhu kusho ukuthi ukuzalwa kuzoqala maduzane. Uma inja ikutshele ukuthi ilungele ukubeletha, lungela ukuhlangabezana nezingane ezilinde isikhathi eside futhi ulungise konke okudingekayo kulokhu. Konke okungenhla kufanele kube khona, intambo kumele ilandelwe utshwala, futhi ibhodlela lamanzi ashisayo noma amabhodlela amanzi ashisayo kufanele alungiselelwe kusengaphambili.
Ukukhipha izinsizakalo izicucu, uphathe izikhali ngotshwala. Nalapha futhi, qiniseka ukuthi inamba yezinombolo zefoni yezilwane iseduze kwefoni yakho. Futhi ibhokisi lamantombazane kufanele futhi lilungele. Beka ingubo ye-flannel noma ukumboza ingubo, egoqwe eshidi noma e-diaper, phansi kwebhokisi. Qaphela ukuziphatha kwezinja. Izibonakaliso zokuqala zokuqala komsebenzi ziyizikhukhula, zimba emgodini, ukuphefumula okusheshayo. Uma unezibonakaliso, ungasho ngokuqiniseka ukuthi imizamo yamuva izoqala, bese kuzalwa.
Ukubukeka kwe-puppy ngemizamo ye-vulva ithola isimo esixubile futhi ivuleke. Kuzobonakala ukuthi umzimba wenja uyathuthumela kanjani, kusukela kulo manzi we-loop ugeleza. Kungaba kokubili obala futhi ophuzi-okwesibhakabhaka. Kungaba namafulegi. Ngezikhathi ezinjalo, inja iqala ukukhothama, mhlawumbe ihlale isesimweni esilungele yona - ilele phansi eceleni kwayo noma imile emilenzeni yayo, lapho imilenze yangaphambili ihlala esihlalweni noma etafuleni. Ungaphazamisi naye, kodwa ulungele ukuthola owokuqala.
Njengomthetho, i-puppy yokuqala ingabanjwa, okuzobangela isimo se-panic kokubili kanye nenja yakho. Kodwa izimo ezinjalo zivela ngokungajwayelekile futhi ukuphazamiseka kwakho akudingeki neze. Kodwa namanje ube uqaphile. Lapho nje amanzi ehamba, into efana ne-bubble noma encane izovela. Ngalesi sikhathi, inja iqala ukuzama. Umsila uphinde uhoxiswe futhi kusukela lapho imbongolo iphuma.
Noma kunjalo, ukubeletha ezinja ezincane noma eziyinhloko kungase kube nezinkinga. Kwenzeka ukuthi, ngemuva kokuba ikhanda noma umzimba uvele ekukhanyeni, ihlaziye phansi, ihlala phansi imbongolo. Ungavumeli inja ikwenze lokhu. Yibambe phansi noma ulele phansi, uphonsa umunwe wakho nge-lever-hand lever bese uyifaka ngaphakathi kwe-loop. Ungesabi, yenza konke ngokuzithoba nangokucophelela. Phakamisa umunwe wakho eceleni komdlwane kuze kube yilapho unomuzwa wokuthi isiswane esise-lintel, okuyindawo ejwayelekile kakhulu emzimbeni. Duck ngokucophelela ngaphansi kwalesi jumper, ukuzungeza umunwe ezungeze umntwana, emva kwalokho inja podnatuzhitsya kanye puppy kalula vyvynet. Ngemuva kwalokhu, ngemuva kokuba i-puppy iphuma yamuva, ezobukeka njengengxenye yesibindi. Ngenkambo evamile yokusebenza ngaphandle kokungenelela kwakho, okulandelayo kunjengokulandelayo. Inja iphula isisindo somntwana wesisu ngamazinyo ayo, ihlaba umthambo womzimba futhi iqala ukuhlanza imbongi yakhe ngokugcoba, ngakho-ke i-samyamon igqugquzela ukuphefumula. Uyadla nalesi sigameko. Ungaphazamisi, uma konke kwenzeka ngokuqondile njengoba kuhloswe. Vele ubukele. Awu, uma umama engasebenzi njengenkhukhu, yenzeni yona. Okungaba mnandi kunalokhu.
Kungenzeka yini ukuthatha ikati ohambweni?
Inja isaba ukuduma
Amakati: ukunakekelwa kwamahlumela aseBrithani
I-Aquarium ekhaya: inhlanzi, amathiphu
Kuthiwani uma ingane isaba izinja?
Kubiza okungakanani ukuyala inkanyezi
I-cottage cheese yokudla njengendlela yokulahlekelwa isisindo
Ubudlelwano, ukwakheka kombhangqwana oshadile
Ukungezwani komzimba ku-poplar fluff
Amakhethini aseFrance ngaphakathi
Indlela yokwenza amashiya amahle: izimfihlo ezine okudingeka wazi
Ukunqoba ukushisa, sizothenga umklamo womoya
Amafomu amahle ka-Anna Semenovich amangala abalandeli bomculi, ividiyo
Indodakazi encane ka Xenia Borodina ikhangisa ukhilimu ku-Instagram, isithombe
Chastushki ngo-Mashi 8 kubafana abafana namantombazane, amama nogogo. Chastushki omdala omdala onenkampani ngoMashi 8
I-Pilates Exercises for Women Ukukhulelwa
Unganikela ngemali emshadweni?
Indlela yokunakekela umenzi wekhofi
Isabelomali semindeni - ngubani oyala umculo?
Inselele ephonswe: amehlo angabhemi amanga-2016
Ungaba kanjani i-blonde ngaphandle kokulimaza izinwele